Buug-yaraha khadka tooska ah, 30 qaabab qoraal oo BILAASH ah oo loogu talagalay Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | Khayraadka, habyaalada
Ma waxaad raadineysaa gawaarida internetka? Sawirka shirkaddu wuxuu aad uga fog yahay astaanta ama magaca sumadda. Shakhsiyadda meheradda waxaa lagu qaabeeyey iyadoo laga helayo ilo isgaarsiineed oo kala duwan halkanna waxaa ku soo badanaya doorsoomayaal badan. Mid ka mid ah waa habka loo soo bandhigo wax soo saarka iyo adeegyada ganacsi. Maanta waxaa jira xeelado badan oo lagu qanciyo laguna wargeliyo macmiilka, qaar ka waxtar badan kuwa kale.
In kasta oo maanta ay jiraan tiro badan oo qaabab ah iyo taageerooyin, runta ayaa ah in tii soo jireenka ahayd ay weli tahay mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan. Buug-yaraha ayaa ah midka ugu wax ku oolka badan maxaa yeelay waxay isku daraan macluumaadka iyo bilicsanaanta xal dhaqaale oo aad u badan marka loo eego booska. Gawaarida gawaarida waxaan si fudud ugu dari karnaa dhammaan walxaha lagama maarmaanka u ah gudbinta dalabkeenna iyo adeegyadeena iyo sidoo kale macluumaadka xiriirka iyo shirkadda lafteeda, sidaas darteed, waxaan rajeyneynaa in xulashadayada saddexda websaydh ee internetka ay faa'iido u yeelan doonaan hagaajinta beddelaadda ganacsigaaga.
1 Sida loo sameeyo buug yar
2 Nafaqada iyo qaab nololeedka caafimaadka qaba
4 Warqad shirkadeed shirkadaha
5 Warqad shirkadeed shirkadaha
6 Warqad shirkadeed shirkadaha
7 Warqad shirkadeed shirkadaha
8 Warqad shirkadeed shirkadaha
9 Warqad shirkadeed shirkadaha
10 Buug-gacmeedka dharka
11 Buugga Trifold ee Shirkadaha
12 Qoraal-laba-laab ah oo loogu talagalay baabuurta
13 Buug-yaraha shirkadda 'Diptych'
14 Buug yaraha ganacsiga
15 Buug yaraha hore iyo gadaal
16 Qoraalka laba-laab ee wadnaha
17 Qoraalka laba-laab ee wadnaha
18 Template warqad shirkadeed
19 Buug-yaraha safarka
20 Buug yar oo qabow
21 Buug-yaraha Shidler Trifold
22 Buug-yaraha Diiwaanka Makhaayadaha
23 Template menu makhaayad
24 Buug-yaraha oo ka kooban afar bog
26 Qoraal-saddex-laab ah
27 Buug-yaraha PSD ee loo yaqaan 'Flyers'
28 Xaraashka maqaaladda qaabka Rustic
29 Soo bandhigid flyer
30 Buug yaraha makhaayadaha guridda
31 Buug yaraha maqaayada caadiga ah
Waa la muujiyay macluumaadka qaabka sawirada ayaa ka soo jiidasho badan macluumaadka qoraalka Sidaa darteed, lasocodka buugyarahayaga sawirada iyo dhamaan noocyada ilaha sawirada waxay na siin karaan dhibic dheeraad ah oo aragga ah iyo waliba karti. Dhamaadka maalinta, waxa ku saabsan ayaa ah in la soo jiito dareenka macmiilka suurtagalka ah iyo in habka akhriska loo sameeyo wax ka fiican oo raaxo leh. Intaa waxaa dheer in lagu guuleysto ficil deg deg ah sida iibsashada wax soo saar ama shaqaaleysiinta, haddii aan ku guuleysano inaan ku baraarujino shucuurta akhristaha, waxay u badan tahay inay na xusuustaan ​​oo ay rabaan inay mustaqbalka nagu soo noqdaan. Xalka ugu habboon wuxuu dheelitirayaa inta udhaxeysa akhrinta, qaabka, dhaqaalaha iyo muujinta.
Buug yar oo wanaagsan waa inuu sidoo kale lahaadaa midabada shirkadahaDabcan, astaanta iyo qaabka ay ku qoran tahay waxa ku qoran sidoo kale waa inay ahaato mid la jaanqaadaysa falsafadda iyo dabeecadda ganacsiga. Marka la eego, hadalka muuqaalka ah waa inuu sidoo kale ahaadaa mid la jaan qaadi kara iibiyaha ama adeeg bixiyaha la xayaysiiyo iyo macmiilka shaqaaleeya.
Dabcan, maahan in dhammaan mashaariicdu isku xariiq ama isku janjeedhaan. Tan waxaan ula jeedaa in dhammaan wixii aan ku iibin lahayn kheyraadkan ay yihiin wax soo saarkeenna ama adeegyadeenna, laakiin in waxa aan iibin doonno dhammaadka maalinta ay tahay waayo-aragnimo iyo dareenno dareen ah oo ay tahay inay si dhammaystiran uga muuqdaan dhismaha garaafkeena. Waxaa jira shirkado u baahan inay iibiyaan hal-abuurka, iyo waxyaabo kale, waxay u baahan yihiin macaamiishooda inay la xiriiraan adeegyadooda iyo aqoonsigooda fikradda asalka.
Caqli ahaan kiisaskan, dhismaha dhammaan walxaha xayeysiinta iyo muuqaalka shirkaddu waa inuu noqdaa mid dhagar badan, feker leh oo la safeeyey. Halkan laga bilaabo waxaan jeclaan lahaa inaan xoojiyo wax: Markasta oo ay suurtagal tahay, waa inaan isku daynaa inaan adeegsanno xirfadlayaal naqshadeeyaama jaantus ahphico inay iyagu mas'uul ka noqdaan shaqadan iyo inay khibradooda iyo aqoontooda u adeegsadaan adeegga aqoonsigaaga ganacsi. In kasta oo shabaqa aad ka heli karto qaddar badan oo bilaash ah oo bilaash ah oo u dhexeeya sheybaarada illaa vector ama waxyaabo madaxbannaan, haddii aynaan ogeyn sida la isugu geeyo oo aan u siino hanaan ku habboon istiraatiijiyadda isgaarsiinta adduunka, waxaan heli doonnaa khilaaf natiijo aan caadi ahayn.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, maanta waxaan jeclaan lahayn inaan idinla wadaagno xul aan ka badnayn ama kayar 30 buug-yaraha gebi ahaanba bilaashka ah iyo tusaalooyinka qoraalka Kuuma adeegi doonaan oo keliya inaad ku dabakho mashaariicdaada shakhsi ahaaneed laakiin sidoo kale inay helaan qaddar wax ku ool ah oo dhiirigelin ah ama xitaa iyaga u qaataan aasaas si ay u bilaabaan horumarinta naqshadeena. Sidaad arki karto, waxaa jira qaabab badan oo kaladuwan oo dhammaantood looma qorsheyn inay daboolaan baahiyaha wada xiriirka. Feejignow oo waqti badan ku bixi si aad u doorato ikhtiyaarka ku habboon mashruucaaga iyo ganacsigaaga. Qiimee waxa baahiyahaagu yihiin iyo gaar ahaan nooca loo yaqaan 'prism' ee aad rabto inaad diiradda saarto dallacsiinta. Ma qorsheyneysaa inaad ku darto xogta ganacsiga ee khuseeya sida taariikhda aasaaskeeda? Qaabka ma loo dhisi doonaa qaab muunad ah alaabooyinka iyo adeegyada?
¿Qunooc jaranjarooyin ah oo aad dejin doonto iyo maxaa cunsurrada waxaad siin doontaa muhiimad dheeraad ah sidaas darteedna aragti weyn ayaa ka dhex jirta halabuurkaagan? Maxay tahay dhadhanka afkaaga ee aad rabto inaad uga tagto dhagaystayaashaada sideedse uga dhaadhicinaysaa una dhiirrigelinaysaa inay raadsadaan macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirkaddaada? Kuwani waa su'aalo ay tahay inaad isweydiiso intaadan shaqada u dhaqaaqin maxaa yeelay qaab dhismeedka isku dhafka iyo muuqaalka ayaa ku kala duwanaan doona hadba ujeedooyinka aad raadineyso.
Xulitaankan aan maanta kaaga tagnay waad heli kartaa naqshado si fudud loo dhaafi karo iyo qaababka hadda socda oo gebi ahaanba bilaash ah iyo wixii ka sarreeya oo dhan si fudud loo codsado loona wax u beddelo illaa aad ka hesho natiijada ugu badan ee la doonayo.
Nafaqada iyo qaab nololeedka caafimaadka qaba
Tani waa tusaale wanaagsan oo ah buug-yare yar. Waa diptych aad u nadiif ah oo qurux badan kaas oo ku siiya macluumaadka la xiriira qaab aad u kooban oo aan ka tanaasulin awoodda sawir qaadista. Sidaad arki karto, waxay diiradda saaraysaa meheradaha caafimaadka, sidaa darteed midabbadeedu waxay ka kooban yihiin miisas diiran oo isku dhafan oo xalal ah oo tilmaamaya dabeecadda sida oranji, buluug, bunni iyo cagaar.
Buug-yarahan la xiriira adduunka moodada ayaa aragti weyn siin doona sawirrada iyo sidoo kale saameynta. Template Tani waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido leh in lagu muujiyo naftaada haddii aad doonaysid inaad la xiriir aad ugu horeysay ee shaqada noocan ah.
Warqad shirkadeed shirkadaha
Wargeysyada shirkadaha ee ganacsiga waxay u muuqdaan inay adeegsadaan xalal casri ah oo xeel dheer iyadoo la adeegsanayo ugu yaraan iyo gaar ahaan meelaha la akhrin karo iyo nidaamsan Cinwaanada dukumiintiga ama dhinacyadu badanaa waxay kujiraan sawirro leh vignettes hal abuur leh isla waqtigaas oo ay fudud yihiin.
Gawaarida ugu badan ee hadda jira waxay leeyihiin xalal leh curiyeyaal iskumid-hufan iyo weel macluumaad ah oo qaabeeya macluumaadka si wanaagsan una kala sooca asalka inta badan ku jira sawirrada iyo sooyaallada inta badan aan diiradda la saarin. Badanaa way fududahay oo waa sahlan tahay in la akhriyo.
para ganacsiyada iyo mashaariicda la xidhiidha adduunka dhismaha Waa wax aad u soo jiidasho leh in lagu ciyaaro qaababka adag ee adag iyo sidoo kale sawirada iyo muuqaalka muuqaalka balaaran.
Liistada makhaayadaha waa inay ka sarreeyaan wax kasta oo wax ku ool ah maxaa yeelay waxaa loogu talagalay inay u adeegaan tixraac ahaan waqtiga iibsashada ama xilliga soo jiidashada cuntayaasha cusub. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in aagag ballaaran loo qoondeeyo tiirarka alaabta iyo qiimaha qaab qoraal ahaan. Macluumaadka waa inuu ahaadaa mid aad u fudud helitaankiisa.
Qeybta naqshadeynta gudaha, caan ku ahaanta sawirka sidoo kale waa muuqataa maaddaama aagagga ballaaran ee booska ay tahay in dib loogu celiyo soo saari sawirro waaweyn taas oo ay suurtogal tahay in lagu qadariyo duruufaha duruufaha.
Qaabka fidsan wuxuu noqon karaa mid soo jiidasho leh gaar ahaan ganacsiyada wax ku leh adduunka madadaalada iyo tikniyoolajiyad cusub. Adeegsiga sawirada waxay ka dhigi kartaa aqoonta farsamada mid ku dhow ciyaar iyo waxyaabaha carruurtu ka kooban yihiin xitaa kuwa hal abuur leh.
Ganacsiyada ay khusayso campo dhar Qaab dhismeedka buuga muunada waa lama huraan, maadaama badeecooyinka uu macmiilku iibsan karo iyo waa maxay dhanka ay siiyaan moodeelladooda waa in la muujiyaa.
Buugga Trifold ee Shirkadaha
Buug-yaraha loogu talagalay shirkadaha Waxay u muuqdaan inay leeyihiin aqlabiyad ballaaran oo ka kooban qoraallada maaddaama ay badanaa ku foogan yihiin xog sida taariikhda aasaasida meheradda, qiyamka iyo falsafadda ay baacsatay shirkaddu iyo dabcan waxyaabaha ugu yar iyo dhammaystirka nadiifka ah.
Qoraal-laba-laab ah oo loogu talagalay baabuurta
Halkan waxaan ku haynaa tusaale aad u xiiso badan oo ku saabsan diifinta baabuurta: Meel ka mid ah qaybta wanaagsan ee booska waxaa loogu talagalay ku darista sawirrada gawaarida ee dhinacyada kala duwan, calaamadaha gawaarida iyo xitaa khariidadaha.
Buug-yaraha shirkadda 'Diptych'
Halkan waxaa ku yaal tusaale kale oo soo jiidasho leh oo loogu talagalay buug-yaraha shirkadaha. Halkan waxaan ku aragnaa sida naqshadeynta walxaha ay wali ujirto iyo xalalka joomatari ee lagu qaso sawirka iyo qoraalka.
Buug yaraha ganacsiga
Goobaha ganacsiga xalalka ugu caadiga ah sidoo kale waxay noqon karaan ikhtiyaar wanaagsan. Halkan waxaan ku aragnaa qaab-dhismeed loo qaybiyay 3 tiirar oo ay ku badan yihiin macluumaadka qoraalka sidoo kale iyadoo ay yartahay waxyaabaha qurxinta.
Buug yaraha hore iyo gadaal
Halkan waxaa ku yaal shey fudud oo loogu talagalay triptych qaab PSD ah taasina waxay noqon kartaa mid waxtar badan maxaa yeelay waxaa lala qabsan karaa nooc kasta oo xal ah.
Qoraalka laba-laab ee wadnaha
Waxa kale oo jira waxyaabo kale oo aan badnayn oo aan caadi ahayn oo ka fog sharraxaadda xirfadeed ee sida ugu fiican ugu shaqeyn kara faafiyo fariimo iyo hanbalyo taariikhaha gaarka ah sida Valentine's.
Mararka qaar xalalka ugu fudud ayaa loo isticmaali karaa samee soo bandhig shey in kasta oo ay marwalba lama huraan tahay in lawaafajiyo midabka midabka xalka shirkadda.
Template warqad shirkadeed
Sawirka la iibin doono ugu horreyntii wuxuu noqon doonaa kan xirfad iyo halista, sidaa darteed xulashada sawirada iyo luqadda ayaa aad muhiim u noqon doonta.
Qoraallada yar yar ee shirkadaha dalxiiska waa inay horumariyaan waa in loo diyaar garoobaa inay ka kooban yihiin khariidado, qorshooyin iyo sawirro si markaa isticmaaluhu u go'aansado inuu si dhakhso ah u galo safar.
Buug yar oo qabow
Isticmaalka midabada barta iyo sagxadaha waaweyn ee midabada leh ayaa xulasho fiican u ah muuji qoraallada, farriimaha iyo astaamaha. Midabka madow wuxuu noqon karaa mid aad u xiiso badan in kasta oo ay tahay in laga fogaado haddii aan soo jeedinayno agglomerations ballaaran oo qoraal ah.
Buug-yaraha Shidler Trifold
Meelaha gudaha ah waad awoodaa ku ciyaar sawiro iyo madax maxaa yeelay waxay u adeegi karaan inay si wanaagsan u muujiyaan waxa aan ka hadlayno, ha noqdaan badeecad ama adeeg.
Buug-yaraha Diiwaanka Makhaayadaha
In liiska makhaayadaha ama xaashiyaha xaashiyaha, waxaan ku dari karnaa sawirro la galiyay tiirarka qiimaha. Macaamilku wuxuu go'aansan doonaa inuu cuno tiro badan oo alaab ah haddii kuwan lagu sawiray sawirro rafcaan leh.
Template menu makhaayad
Xaaladaha kale, gaar ahaan makhaayadaha dhamaadka sare, xalka ugu fiican wuxuu noqon karaa in lagu daro kaliya astaan ​​iyo warqad.
Buug-yaraha oo ka kooban afar bog
In kasta oo aysan ahayn wax caadi ah, buug-yarahan sidoo kale waxaa loo qaabeyn karaa qaab ah buugga macluumaadka, gaar ahaan markaan damacsan nahay inaan sameyno alaabo badan oo cufan.
Waxaa lagugula talinayaa ka hor intaanan shaqada u soo degin inaan ka cadahay midabada shirkadaha. Marar badan ayaan u baahanahay inaan u adeegsanno midabada labaad ama midabada kala geddisan kuwa shirkadaha waana muhiim inaan ogaanno sida ugu wanaagsan ee la isugu dari karo.
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa sawirrada cinwaanada cinwaan kasta. Qaabkan waxaan awoodi doonnaa inaan si wanaagsan u qeybinno una qaabeyno macluumaadka.
Buug-yaraha PSD ee loo yaqaan 'Flyers'
Iyada oo loo marayo qaab dhismeedka iyo gradients-ka waxaan awoodnaa siiyaan mug iyo tilmaamid halabuurka. Sidaa darteed habka akhrisku aad ayuu u dhaqso badan yahay.
Xaraashka maqaaladda qaabka Rustic
Ganacsiyada cagaaran waxaan aadi karnaa a bilicsanaanta more rustic oo leh ujeedooyin alwaax ama warqad iyo qaabab ah.
Soo bandhigid flyer
Waraaqaha badanaa way leeyihiin cabbir aad u yar sidaa darteed waxaa lagama maarmaan noqon doonta inaan ogaanno sida loogu ciyaaro booska si akhristaha uu ugu helo macluumaadka qaab fudud oo jaleec ah.
Buug yaraha makhaayadaha guridda
Qurxinta bilicdu waxay ku dari kartaa dhadhan fiican iyo xarrago buug-yaraha ganacsiga iyo maqaayadaha.
Buug yaraha maqaayada caadiga ah
Waxa kale oo fikrad fiican ah in lagu cayaaro astaamaha mihnad-xirfadeedka iyo walxaha si toos ah loo garto oo la xidhiidha shucuurta iyo fikradaha la doonayo. Halkan waxaa ku yaal tusaale ka mid ah menu-ka caadiga ah ee sida degdegga ah ula xiriira ereyada sida qoyska, isu dhowaanshaha, iyo xasilloonida.
Haddii xulashadan cajiibka ah kadib aad wax badan dooneysay ama aadan ku guuleysan inaad hesho naqshadda ku habboon baahidaada, Waan kugula talinayaa inaad booqato bangigan kheyraadka halkaasoo ay ku yaalliin tusaalooyin qoraallo shirkadeed iyo waxyaabo kale oo badans walxaha waa lacag la'aan. Waa kuwan tusaale yar oo ah waxa aad ka heli karto halkaa:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » habyaalada » Buug-yaraha khadka tooska ah, 30 tusaalooyin buug-yare oo bilaash ah
Jawaab Patricio Rosero
@Paola waad soo dhaweyneysaa!
alaab wanaagsan, mahadsanid
Jawaab Dario Gonzalez David
@Dario Gonzalez David waad soo dhaweyneysaa!
@Vivi Suárez mahadsanid Vivi! Waan eegi doonaa
@Omar waad soo dhaweyneysaa! : =) Salaan
Isugeyn aad u wanaagsan. Waxay faa'iido u tahay kuwa doonaya inay daabacaan buug-yarahooda si ay u helaan sheylo kala duwan oo asal ah kuwan oo kale. Waxaan kula talin doonaa iyaga macaamiisheenna doonaya inay sameeyaan agabkooda xayeysiinta ah. Dhamaan wanaag!
Ku jawaab Stampaprint
Salaan Stampaprint! : =)
vick avalos dijo
sida loo soo dejisto
Ku jawaab vicky avalos
HAA, waa la soo dejisan karaa René, midkee adigu ma adigu?
naqshadaha cajiibka ah, waxaan soo degsaday mid ka mid ah nashqadahaaga waxaanan jeclaan lahaa inaad fadlan i caawiso
Sideen ku heli karaa muuqaalkaas dhabta ah ee aad siisay sida 3d, waxay noqon laheyd mid waxtar badan leh
aad baad u mahadsantahay, salaan
Waa maxay naqshaddu kayme?
Aad baad u mahadsan tahay kan ugu fiican ...
Jawaab Oscar Barrera
Waad soo dhawaynaysaa Oscar!
Sideen u saxaa?
Waad wax ka beddeli kartaa iyaga si aad uga dhigto Victor
Waad ku mahadsantahay wadaagida qalabkan
Mawduucyo aad u wanaagsan ayaa waxtar badan leh mahadsanid
Ku soo jawaab Rafael Garcia
Waad salaaman tihiin saaxiib, sidee loo soo dajiyaa waan isku dayay laakiin ma aqaano sida loo sameeyo fadlan caawi.
Galab wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan raali geliyo astaamaha lagu diyaariyo flyer… Waxaan ku bilaabayaa qalabkan waana xiiso leh in gacantan lagu haysto have Haddii aad naxariis laheyd… Mahadsanid…
Jawaab Ivis Ramos